We She Me: ကျွန်တော်ပိုသိလာတဲ့ ကျွန်တော့် Hero
Anonymous - 7/8/07, 12:40 PM
ဗမာပြည်မှာ တကယ်ပဲ အဲလို oracle database တခု လိုလာပြီ ။
ဆရာဝန်မလုပ်ဘဲ တော်လှန်ရေးလုပ်ရတဲ့ ချေဂွေဗားရားရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို အရမ်းလေးစားပါတယ် ။
ဒါနဲ့ အကိုနဲ့အမ ရဲ့ဘလောဂ့် ဒီဇိုင်းလေးက တမျိုးလေး ထူးနေတယ် ။ ဘာနဲ့ လုပ်တာလဲ ။
Andy Myint - 7/8/07, 2:53 PM
မြန်မာပြည်က သန်းခေါင်စားရင်းဌာနမှာလား မသိဘူး Database အကြီးကြီး တစ်ခု ရှိတယ်တော့ ကြားဖူးပါတယ်။ ဖွားသေစားရင် အတိအကျလား မှတ်ပုံတင်ရှိတဲ့သူတွေ အတွက်ပဲလား၊ နိုင်သလောက်ပဲလားတော့ အသေအချာ မသိပါဘူး။ Infrastructure မကောင်းတော့ System တစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့ကလည်း ခက်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ဂျစ်တူး... အဲ... ဂျာအေး သူ့အမေရိုက် ဖြစ်နေတာပါ။ တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။
ဒီ Blog က Blogger မှာပါတဲ့ Minima Template ကိုပဲ ဟို Blog သွားကြည့်ပြီး နည်းနည်းပြင်လိုက် ဒီ Blog သွားကြည့်ပြီး နည်းနည်းပြင်လိုက်နဲ့ ပြင်လွန်းတော့ ဖင်ချွန်းသွားတာပါ။ အဟဲ။
Thiha Kyaw Zaw - 7/11/07, 4:38 AM
Thanks for posting it, Ko Andy. Btw, I saw The' Nu's photo in ur flicker. Do you know with her? She is my cousin.
Andy Myint - 7/11/07, 10:48 AM
Whatasmall world! She is my bro's friend... sort of ... ဟဲဟဲ